purushottam « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
यसरी मेडिकल प्रयोगशालालाई बनाउन सक्छौं प्राविधिक गुणस्तर
डा. श्रेष्ठ (एमडी) सिद्धि पोलि प्याथ ल्यावको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरी कस्तुर्वा मेडिकल कलेज मनिपालबाट प्याथोलोजीमा एमडी गर्नुभएका डा. श्रेष्ठ विगत ४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि
सिद्धी पोलि प्याथ ल्याबले पायो: NABL ISO 15189 : 2012 एक्रिडिटेशन
काठमाडौंको चारखालस्थित सिद्धी पोलि प्याथल्याबलेNABL ISO 15189 : 2012 एक्रिडिटेशन मान्यता पाएको छ । नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फर टेष्टिङ्ग एण्ड क्यालिब्रेशन लेबोटेरिज NABL बाट मुलुकमा मान्यता पाएको नेपालको पहिलो stand alone प्याथोलोजी
करियर-मृगेन्द्र मेहेर श्रेष्ठ
मेरो पारिवारीक पृष्ठभुमि यो पेशासँग सम्बन्धित थिएन । तै पनि कलेजमा अध्ययन गर्ने साथीभाइले औषधि व्यवसायमा इज्जत, मान प्रतिष्ठा जोडिएको, बिरामीलाई सेवा गर्ने मौका पाइने र आम्दानी पनि हुने संभावना
दाम्पत्य : डा. पुकार र नविना
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भक्तपुरको सल्लाघारी स्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा ट्रान्सप्लान्ट सर्जन हुनुहुन्छ । उहाँ यस केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । डा. पुकारले नेपालमा ३
डाक्टरहरुको विजय या पराजय ?
– सरकारलाई विवेकभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर सम्झौता गर्न बाध्य पारेपछि डा.केसी विजयको उल्लासपूर्ण मूडमा हुनु होला, तर चिकित्सकहरुकै ठूलो समूह पराजय र हिनताबोधले ग्रस्त बनेको छ । – डा.केसीका सबै माग
मेडिकल प्रयोगशाला गाइडलाइन, तपाईको ल्याव कुन वर्गमा ?
अबैध प्याथोलोजी ल्याबहरुको जालमा बिरामी अहिले बजारमा भुस्याहा कुकुर सरह प्याथोलोजी ल्याब खुलिरहेका छन् । जहाँ बिरामीको ज्यासँग खेलवाड भइरहेको छ भने आर्थिक दोहन पनि त्यत्तिकै भएको छ । यस्ता
लेजरथेरापी पहिलोपटक नेपाल भित्र्याउने डाक्टर लेजर प्रविधिबारे के भन्नुहुन्छ ?
– वर्षौदेखि निको नभएको घाउ लेजर विकिरण दिएको एक हप्तामा निको हुन थाल्छ । त्यही चीज शरीरका हरेक अंगमा लागु हुन्छ । लेजर विकिरणले साइडइफेक्ट गर्दैन भन्ने प्रमाणीत भइसक्दा पनि
क्यान्सर बिरुद्धको लडाईं ! ‘हामीले सक्छौं र मैले सक्छु’ को सान्दर्भिकता
– क्यान्सरलाई कडा र जटिल रोगको रुपमा लिन हुँदैन । यो नसर्ने रोगमध्येको एक दीर्घ रोग हो । समयमा पहिचान गरेर उपचार गरेमा निको पार्न सकिन्छ । -एक वर्षमा क्यान्सर उपचारका
पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा
यस कार्यक्रममा आवद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता किन छ ? थोरै प्रीमियममा अत्यधिक उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि कागजपत्र, सर्जिवन, पुलिस रिपोर्ट बनाउन जरुरत पर्दैन । मुलुकलाई पार्ने प्रभाव
सबैको स्वास्थ्य बीमा गराउने तयारी
कतै तपाईंको परिवारले सामान्य स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि धान्न त सकिरहेको छैन ? यदि तपाईं यस किसिमको समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस् । सरकारले शुरु गरेको